Dota2 ရဲ့ League စနဈသဈကို ဝဖေနျလိုကျတဲ့ Team Secret နညျးပွ Heen – Gaming Noodle
Dota2 ရဲ့ League စနဈသဈကို ဝဖေနျလိုကျတဲ့ Team Secret နညျးပွ Heen
၂၀၂၀ ဖဖေျောဝါရီလ ၂၅ ရကျနေ့ က ကွညောလိုကျတဲ့ Valve ရဲ့ 2020-2021 Dota Pro Circuit (DPC) ရာသီအတှကျ Format အသဈမှာတော့ အရငျနှဈမြားနဲ့ မတူဘဲ ပွောငျးလဲမှုမြားစှာ ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ (အသေးစိတျကို ဒီ Link မှာ ဖတျရှုနိုငျပါတယျ) ပွိုငျပှဲတှကေို အရငျလို ရှုံးထှကျစနဈထကျ ဒသေတှငျးလိဂျ League စနဈကို ပွောငျးလဲသှားမှာဖွဈပွီး အသငျးကွီးတှထေကျ Tier 2/3 အဆငျ့ အသငျးငယျမြား ပိုမိုကစားခှငျ့ရလာပွီး တိုးတကျနိုငျဖို့ကို ရညျရှယျထားပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး လူ့အလို နတျမလိုကျနိုငျဆိုသလိုပဲ Valve ရဲ့ Dota2 League ပုံစံ စနဈသဈဟာ လူတိုငျးကို မပြျောရှငျစပေါဘူး။ မပြျောရှငျတဲ့ထဲမှာလညျး TI7 ခနျြပီယံ လကျရှိ Team Secret နညျးပွကွီး “Heen” လညျး တဈယောကျအပါအဝငျပါပဲ။ Valve က တရားဝငျ ကွညောအပွီး (၁၀) နာရီခနျ့ အကွာမှာတငျ Heen က သူ့ရဲ့ အလိုမကမြှုတှကေို Twitter ပျေါမှာ အခုလို ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ပထမဆုံးအနနေဲ့ ပွောခငျြတာကတော့ ဒသေတှငျး League လိဂျပွိုငျပှဲတှနေဲ့ ပါတျသကျပွီး မကနြေပျတာမရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ပှဲအခြိနျဇယားကို သခြောကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ ၄ ရကျထဲနဲ့ ကစားလို့ရတဲ့ Qualifier ကို ၆ ပါတျကွာအောငျ ကစားသှားမယျလို့ ဖျောပွထားပါတယျ။ အသငျး (၈) သငျးဟာ Best-of-three format နဲ့ ပါတျလညျကစားရငျ ပှဲတှအေမြားကွီးဆော့ရမယျဆိုတာကို နားလညျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အရငျ Qualifier တှကွောခြိနျထကျ အဆပေါငျးမြားစှာ ပိုကွာအောငျ ၆ ပါတျအထိ တကယျကို ခြဲ့ကား ကစားကွတော့မှာလားဗြာ။
ပွီးတော့ ဒါဟာ Major တဈခုကို တကျရောကျခှငျ့ရဖို့ အရငျကထကျ (၁၀) ဆ ပိုမိုကွာမွငျ့သှားမှာဖွဈပွီး အဲဒီ Major တှကေလညျး အရငျကထကျ အကွိမျရနေညျး ဆုကွေးနညျးသှားမှာပါ။ ပွီးတော့လညျး DPC Point ခှဲဝမှေုကလညျး ကွောငျတောငျတောငျ နိုငျပါတယျ။ ဒီစနဈသဈကွောငျ့လညျး တရားဝငျ DPC မဟုတျတဲ့ ပွိုငျပှဲတှေ (ဥပမာ WePlay! Mad Moon) ပိုပွီး လြှော့နညျးသှားဖို့ပဲ ရှိပါတယျ။
​နောကျတဈခုက League ဆိုတာ ပွိုငျပှဲမဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတျောယုံကွညျတာကတော့ တရားဝငျ DPC မဟုတျတဲ့ ပွိုငျပှဲတှကေ ပရိသတျတှကေိုရော ပွိုငျတဲ့ အသငျးတှကေိုရော တငျဆကျမှု ကောငျးကောငျးပေးနိုငျပါတယျ။ သူတို့ဟာ ပွိုငျပှဲကို ကွိုကျသလို Format နဲ့ ကငျြးပနိုငျပွီး ကြှနျတျောတို့တှကေလညျး မတူညီတဲ့ ပှဲအပွငျအဆငျတှေ ကငျြးပပုံတှေ meme တှကေို ပွိုငျပှဲတဈခုစီကနေ ခံစားနိုငျပါတယျ။
ဆုကွေးခှဲဝမှေု – သူငယျတနျးလိုပါပဲ။ အကုနျလုံး ဆုကွေးကို ညီတူညီမြှ (နီးပါး) ရနကွေပါတယျ။ ဒါဟာ ငါ့ကို အရမျးစိတျအနှောကျအယှကျ မဖွဈစပေမေယျ့ တကယျတမျးတော့ အရမျး​ပိနျးလှနျးပါတယျ။ Tier 2/3 အဆငျ့ အသငျးငယျတှကေို အတငျးကွီး ထောကျပံ့ပေးနသေလိုပါပဲ။ ဒါကိုလညျး ကြှနျတျော မဆနျ့ကငျြလိုပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အသငျးတဈသငျး အမွငျကနကွေညျ့ရငျ သငျဟာ အခြိနျ (၂) လခနျ့ ရငျးပွီး ကစားသမား တဈယောကျကို ဆုကွေး ဒျေါလာ ၂၀၀၀ ကနေ ၃၀၀၀ ကွားထဲပဲ လစဉျ ရနမှောပါ။ ဒါတောငျ ဆုကွေးကို ၅ ယောကျ ညီတူညီမြှ ခှဲဝမှေပါ။
DPC Point ခှဲဝမှေု – Dota2 ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု နညျးပါးတဲ့ဒသေတှကေို ပြိုးထောငျပေးတာ ကောငျးပါတယျ။ ကြှနျတျောဟာ လူပွကျတှေ အပွညျ့နဲ့ ကိုရီးယား Dota ကနလောခဲ့တာဆိုတော့ ဒါကို နားလညျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခှငျ့အရေး ညီတူညီမြှ ရရှိခွငျးနဲ့ အကြိုးရလဒျ ညီတူညီမြှ ရရှိခွငျးဆိုတာ မတူပါဘူး။ ဒသေတှအေားလုံးမှာ Dota2 အရညျအခငျြးက တူညီနကွေလို့လား? မတူဘူးလေ။
ဒါဆို ကိုယျ့ဒသေတှငျး Leagueရဲ့ 1st ကနေ 5th ခြိတျတဲ့ အသငျးတှရေတဲ့ DPC Point က ဘာလို့ တခွားဒသေတှနေဲ့ တူနရေသေးတာလဲ? သငျဟာ အခွားဒသေက အသငျးတှနေဲ့ အစမျးသပျ မခံရသေးပဲနဲ့ ဘာလို့ DPC Point တှေ မတရားကွီး ရနတောလဲ? The International (TI) ဆိုတာ ဒသေအားလုံး ပါဝငျခှငျ့ရှိတယျဆိုပမေယျ့ ဒါဟာ တနျးတူအခှငျ့အရေး ရရှိမှုရဲ့ ဆိုးရှားတဲ့ ဥပမာ တဈခုပါပဲ။ ဒါမြိုးကို ပွိုငျဆိုငျမှု ပွငျးထနျတယျလို့ ချေါကွသေးတာလား? ငါတဈယောကျပဲ ရူးကွောငျကွောငျ ဖွဈနတောလား?
League format မှာ ပထမတနျးက အောကျဆုံး ၂ သငျးနဲ့ ဒုတိယတနျးက ထိပျဆုံး ၂ သငျး တနျးတကျ တနျးဆငျး စနဈနဲ့ နရောလဲကွတယျ။ အိုကေ။ ဒါဆို သူတို့ဟာ ပွိုငျတောငျမပွိုငျဖူးကွပဲနဲ့ ဘယျသူပိုတျောတယျဆိုတာ တနျးဆုံးဖွတျလိုကျတာပေါ့? ကလေး ၂ ယောကျကို သူတို့ အရုပျတှကေို လဲခိုငျးပွီး ကောငျးကောငျးဆော့လို့ ပွောလိုကျသလိုပါပဲ။ သူတို့ဟာ ဘာလို့ တဈနှဈကို League ပွိုငျပှဲ ၃ ကွိမျပဲ လုပျတယျဆိုတာ သိလိုကျပါပွီ။ တကယျ့ကိုောကျတလှဲပါပဲ။ တကယျလို့ League တဈခုက ထိပျဆုံး ၆ သငျးဟာ တခွား League က အသငျးတှထေကျ ပိုကောငျးတယျလို့ ဆိုကွပါစို့။ (ဥရောပအသငျးတှကေို ဥပမာထားနိုငျပါတယျ) အဆငျ့ ၇-၈ က အသငျးတှကေလညျး တကယျကို ပိုကောငျးနပေမေယျ့ သူတို့ဟာ တနျးတကျ တနျးဆငျး စနဈကွောငျ့ ဒီတိုငျး သူတို့နရောကို ဖယျပေးလိုကျရမှာလား?
Last Major Europe Closed Qualifier Teams
ဟုတျပွီ။ ကြှနျတျောပွောဖို့ မသှေ့ားတယျ။ League တဈခုက ထိပျဆုံးအသငျးက ရှုံးထှကျ စနဈရောကျရငျ Upper Bracket ကို တနျးရောကျသှားမှာပါ။ ဒါဆို အဲဒီ ဒသေတှငျး ထိပျဆုံးအသငျးက ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး (၁၂) အဆငျ့ကို ရောကျသှားပွီပေါ့။
Major ဆုကွေး – ၂၀၁၅ တုနျးက Major ပထမရတဲ့အသငျးဟာ ဆုကွေး ဒျေါလာ တဈသနျး ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၂၀၂၁ ရောကျတော့ ဒျေါလာ ၂ သိနျးပဲ ရပါတော့တယျ။ ဒါကိုဖတျနတေဲ့ သူတှကေတော့ ကြှနျတေျာ့ကို လောဘကွီးတယျ ထငျနပေါလိမျ့မယျ။ ဟုတျတာပေါ့။ ကြှနျတျောက ငှကေို သိပျကွိုကျတာ။ Major တှကေို ဂရုကို မစိုကျပါဘူး။
ကြှနျတျော လူတှကေို အပွငျမှာ ပွောဖူးပါတယျ။ နှဈစဉျ စကျတငျဘာကနေ ဇူလိုငျအထိ (၁၁)လ ဆိုတာ TI အတှကျဆော့နတေဲ့ အုပျစုပှဲစဉျတှလေိုပါပဲ။ ကြှနျတျောဟာ ဖွဈနိုငျရငျ ပွိုငျပှဲတှအေားလုံးမှာ ဘိတျခြီးဖွဈပွီး TI ခနျြပီယံဆုကိုသာ ရယူလိုပါတယျ။ တခွားပွိုငျပှဲတှအေားလုံးကို ခနျြပီယံဖွဈပွီး TI မှာ ဒုတိယ ရတာကိုတောငျ မကနြေပျနိုငျပါဘူး။ ဒါကို ကစားသမား အမြားစုက သဘောတူပါလိမျ့မယျ။
ကြှနျတျော တကယျထောကျပွခငျြတဲ့ အခကျြကတော့ သငျဟာ ပုံမှနျထကျ အခြိနျတှေ ပိုကုနျမှာဖွဈပွီး တခွား ဒသေက အသငျးတှနေဲ့ မကစားရသေးပဲ DPC Point တှအေမြားကွီး ရနမှောပါ။ အသငျးတဈသငျးက တကယျလို့ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး (၁၂) သငျးမွောကျ ဖွဈနရေငျတောငျ စနဈသဈအရ TI ဝငျခှငျ့မရဖို့ ရာခိုငျနှုနျးမြားပါတယျ။
Dreamleague Season-13 Champion Team Secret
Major အတှကျ ရမယျ့ DPC Point
ဒသေတှငျး ပထမရတဲ့ အသငျးဟာ လကျရှိမှာတော့ ကမ်ဘာ့ အကောငျးဆုံးအသငျးနဲ့ တနျးတူ DPC Point တှေ ရရှိနမှောပါ။ ဒါပမေယျ့ Playoff က အောကျဆုံး ၄ သငျး (အဆငျ့ ၉-၁၂) ကတော့ ဆုကွေး သုညနဲ့ DPC Point လညျး ရမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါဆို အကုနျလုံးက နှဈသိမျ့ဆုတောငျ မရကွတော့ဘူးပေါ့?
ကြှနျတော့အထငျ Valve က ဒီနှဈထဲမှာ အသငျးတှေ (အထူးသဖွငျ့ အသငျးကွီးတှေ) အနားယူကွတာ Major တှဝေငျမပွိုငျတာတှကေို ကွိုကျပုံ မပျေါပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ပဲ DPC စနဈဟာ တပွေးညီရှိပွီး ခနျ့မှနျးရ ခကျနတောပါ။ ကြှနျတျောမွငျတာကတော့ Valve ဟာ အသငျးတှကေို Major အားလုံးကို အတငျးအကပျြ ယှဉျပွိုငျစတောထကျ Major တှမှော အနားမယူအောငျ မကျလုံးတှပေေးပွီး ဆှဲဆောငျသငျ့ပါတယျ။
အနှဈခြုပျအနနေဲ့ဆိုရငျ ဒီ DPC League စနဈအသဈက Dota မှာ Patch အကွီးကွီး အသဈထှကျသလိုပါပဲ။ ကွောငျတောငျတောငျ အသဈအဆနျး အမြားကွီးနဲ့ ပွနျပွီး Balance ဖွဈဖို့ ပွုပွငျရဦးမှာပါ။ တခြို့လူတှကေတော့ ပွောနကွေပါလိမျ့မယျ။ အသငျးကွီးတှဟော မုနျ့ကို မြှဝမေစားခငျြတာလို့ ထငျကွမှာပါ။ တကယျတမျး ဖွဈပကျြနတောကတော့ မုနျ့က ပိုသေးသှားတာဖွဈပွီး ဒါကိုခှဲဝနေတေဲ့ ဓါး ကလညျး ကြိုးနတော ဖွဈပါတယျ။
Dota2 ရဲ့ League စနစ်သစ်ကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ Team Secret နည်းပြ Heen
၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့ က ကြေညာလိုက်တဲ့ Valve ရဲ့ 2020-2021 Dota Pro Circuit (DPC) ရာသီအတွက် Format အသစ်မှာတော့ အရင်နှစ်များနဲ့ မတူဘဲ ပြောင်းလဲမှုများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ (အသေးစိတ်ကို ဒီ Link မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်) ပြိုင်ပွဲတွေကို အရင်လို ရှုံးထွက်စနစ်ထက် ဒေသတွင်းလိဂ် League စနစ်ကို ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပြီး အသင်းကြီးတွေထက် Tier 2/3 အဆင့် အသင်းငယ်များ ပိုမိုကစားခွင့်ရလာပြီး တိုးတက်နိုင်ဖို့ကို ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း လူ့အလို နတ်မလိုက်နိုင်ဆိုသလိုပဲ Valve ရဲ့ Dota2 League ပုံစံ စနစ်သစ်ဟာ လူတိုင်းကို မပျော်ရွှင်စေပါဘူး။ မပျော်ရွင်တဲ့ထဲမှာလည်း TI7 ချန်ပီယံ လက်ရှိ Team Secret နည်းပြကြီး “Heen” လည်း တစ်ယောက်အပါအဝင်ပါပဲ။ Valve က တရားဝင် ကြေညာအပြီး (၁၀) နာရီခန့် အကြာမှာတင် Heen က သူ့ရဲ့ အလိုမကျမှုတွေကို Twitter ပေါ်မှာ အခုလို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့ ဒေသတွင်း League လိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး မကျေနပ်တာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပွဲအချိန်ဇယားကို သေချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ၄ ရက်ထဲနဲ့ ကစားလို့ရတဲ့ Qualifier ကို ၆ ပါတ်ကြာအောင် ကစားသွားမယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အသင်း (၈) သင်းဟာ Best-of-three format နဲ့ ပါတ်လည်ကစားရင် ပွဲတွေအများကြီးဆော့ရမယ်ဆိုတာကို နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရင် Qualifier တွေကြာချိန်ထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုကြာအောင် ၆ ပါတ်အထိ တကယ်ကို ချဲ့ကား ကစားကြတော့မှာလားဗျာ။
ပြီးတော့ ဒါဟာ Major တစ်ခုကို တက်ရောက်ခွင့်ရဖို့ အရင်ကထက် (၁၀) ဆ ပိုမိုကြာမြင့်သွားမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီ Major တွေကလည်း အရင်ကထက် အကြိမ်ရေနည်း ဆုကြေးနည်းသွားမှာပါ။ ပြီးတော့လည်း DPC Point ခွဲဝေမှုကလည်း ကြောင်တောင်တောင် နိုင်ပါတယ်။ ဒီစနစ်သစ်ကြောင့်လည်း တရားဝင် DPC မဟုတ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေ (ဥပမာ WePlay! Mad Moon) ပိုပြီး လျှော့နည်းသွားဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။
​နောက်တစ်ခုက League ဆိုတာ ပြိုင်ပွဲမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကတော့ တရားဝင် DPC မဟုတ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေက ပရိသတ်တွေကိုရော ပြိုင်တဲ့ အသင်းတွေကိုရော တင်ဆက်မှု ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပြိုင်ပွဲကို ကြိုက်သလို Format နဲ့ ကျင်းပနိုင်ပြီး ကျွန်တော်တို့တွေကလည်း မတူညီတဲ့ ပွဲအပြင်အဆင်တွေ ကျင်းပပုံတွေ meme တွေကို ပြိုင်ပွဲတစ်ခုစီကနေ ခံစားနိုင်ပါတယ်။
ဆုကြေးခွဲဝေမှု – သူငယ်တန်းလိုပါပဲ။ အကုန်လုံး ဆုကြေးကို ညီတူညီမျှ (နီးပါး) ရနေကြပါတယ်။ ဒါဟာ ငါ့ကို အရမ်းစိတ်အနှောက်အယှက် မဖြစ်စေပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ အရမ်း​ပိန်းလွန်းပါတယ်။ Tier 2/3 အဆင့် အသင်းငယ်တွေကို အတင်းကြီး ထောက်ပံ့ပေးနေသလိုပါပဲ။ ဒါကိုလည်း ကျွန်တော် မဆန့်ကျင်လိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အသင်းတစ်သင်း အမြင်ကနေကြည့်ရင် သင်ဟာ အချိန် (၂) လခန့် ရင်းပြီး ကစားသမား တစ်ယောက်ကို ဆုကြေး ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ကနေ ၃၀၀၀ ကြားထဲပဲ လစဉ် ရနေမှာပါ။ ဒါတောင် ဆုကြေးကို ၅ ယောက် ညီတူညီမျှ ခွဲဝေမှပါ။
DPC Point ခွဲဝေမှု – Dota2 ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နည်းပါးတဲ့ဒေသတွေကို ပျိုးထောင်ပေးတာ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ လူပြက်တွေ အပြည့်နဲ့ ကိုရီးယား Dota ကနေလာခဲ့တာဆိုတော့ ဒါကို နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခွင့်အရေး ညီတူညီမျှ ရရှိခြင်းနဲ့ အကျိုးရလဒ် ညီတူညီမျှ ရရှိခြင်းဆိုတာ မတူပါဘူး။ ဒေသတွေအားလုံးမှာ Dota2 အရည်အချင်းက တူညီနေကြလို့လား? မတူဘူးလေ။
ဒါဆို ကိုယ့်ဒေသတွင်း Leagueရဲ့ 1st ကနေ 5th ချိတ်တဲ့ အသင်းတွေရတဲ့ DPC Point က ဘာလို့ တခြားဒေသတွေနဲ့ တူနေရသေးတာလဲ? သင်ဟာ အခြားဒေသက အသင်းတွေနဲ့ အစမ်းသပ် မခံရသေးပဲနဲ့ ဘာလို့ DPC Point တွေ မတရားကြီး ရနေတာလဲ? The International (TI) ဆိုတာ ဒေသအားလုံး ပါဝင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ဒါဟာ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ ဥပမာ တစ်ခုပါပဲ။ ဒါမျိုးကို ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်တယ်လို့ ခေါ်ကြသေးတာလား? ငါတစ်ယောက်ပဲ ရူးကြောင်ကြောင် ဖြစ်နေတာလား?
League format မှာ ပထမတန်းက အောက်ဆုံး ၂ သင်းနဲ့ ဒုတိယတန်းက ထိပ်ဆုံး ၂ သင်း တန်းတက် တန်းဆင်း စနစ်နဲ့ နေရာလဲကြတယ်။ အိုကေ။ ဒါဆို သူတို့ဟာ ပြိုင်တောင်မပြိုင်ဖူးကြပဲနဲ့ ဘယ်သူပိုတော်တယ်ဆိုတာ တန်းဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့? ကလေး ၂ ယောက်ကို သူတို့ အရုပ်တွေကို လဲခိုင်းပြီး ကောင်းကောင်းဆော့လို့ ပြောလိုက်သလိုပါပဲ။ သူတို့ဟာ ဘာလို့ တစ်နှစ်ကို League ပြိုင်ပွဲ ၃ ကြိမ်ပဲ လုပ်တယ်ဆိုတာ သိလိုက်ပါပြီ။ တကယ့်ကိုောက်တလွဲပါပဲ။ တကယ်လို့ League တစ်ခုက ထိပ်ဆုံး ၆ သင်းဟာ တခြား League က အသင်းတွေထက် ပိုကောင်းတယ်လို့ ဆိုကြပါစို့။ (ဥရောပအသင်းတွေကို ဥပမာထားနိုင်ပါတယ်) အဆင့် ၇-၈ က အသင်းတွေကလည်း တကယ်ကို ပိုကောင်းနေပေမယ့် သူတို့ဟာ တန်းတက် တန်းဆင်း စနစ်ကြောင့် ဒီတိုင်း သူတို့နေရာကို ဖယ်ပေးလိုက်ရမှာလား?
ဟုတ်ပြီ။ ကျွန်တော်ပြောဖို့ မေ့သွားတယ်။ League တစ်ခုက ထိပ်ဆုံးအသင်းက ရှုံးထွက် စနစ်ရောက်ရင် Upper Bracket ကို တန်းရောက်သွားမှာပါ။ ဒါဆို အဲဒီ ဒေသတွင်း ထိပ်ဆုံးအသင်းက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး (၁၂) အဆင့်ကို ရောက်သွားပြီပေါ့။
Major ဆုကြေး – ၂၀၁၅ တုန်းက Major ပထမရတဲ့အသင်းဟာ ဆုကြေး ဒေါ်လာ တစ်သန်း ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၂၁ ရောက်တော့ ဒေါ်လာ ၂ သိန်းပဲ ရပါတော့တယ်။ ဒါကိုဖတ်နေတဲ့ သူတွေကတော့ ကျွန်တော့်ကို လောဘကြီးတယ် ထင်နေပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်တာပေါ့။ ကျွန်တော်က ငွေကို သိပ်ကြိုက်တာ။ Major တွေကို ဂရုကို မစိုက်ပါဘူး။
ကျွန်တော် လူတွေကို အပြင်မှာ ပြောဖူးပါတယ်။ နှစ်စဉ် စက်တင်ဘာကနေ ဇူလိုင်အထိ (၁၁)လ ဆိုတာ TI အတွက်ဆော့နေတဲ့ အုပ်စုပွဲစဉ်တွေလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်ဟာ ဖြစ်နိုင်ရင် ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမှာ ဘိတ်ချီးဖြစ်ပြီး TI ချန်ပီယံဆုကိုသာ ရယူလိုပါတယ်။ တခြားပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးကို ချန်ပီယံဖြစ်ပြီး TI မှာ ဒုတိယ ရတာကိုတောင် မကျေနပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကို ကစားသမား အများစုက သဘောတူပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော် တကယ်ထောက်ပြချင်တဲ့ အချက်ကတော့ သင်ဟာ ပုံမှန်ထက် အချိန်တွေ ပိုကုန်မှာဖြစ်ပြီး တခြား ဒေသက အသင်းတွေနဲ့ မကစားရသေးပဲ DPC Point တွေအများကြီး ရနေမှာပါ။ အသင်းတစ်သင်းက တကယ်လို့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး (၁၂) သင်းမြောက် ဖြစ်နေရင်တောင် စနစ်သစ်အရ TI ဝင်ခွင့်မရဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများပါတယ်။
Major အတွက် ရမယ့် DPC Point
ဒေသတွင်း ပထမရတဲ့ အသင်းဟာ လက်ရှိမှာတော့ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံးအသင်းနဲ့ တန်းတူ DPC Point တွေ ရရှိနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် Playoff က အောက်ဆုံး ၄ သင်း (အဆင့် ၉-၁၂) ကတော့ ဆုကြေး သုညနဲ့ DPC Point လည်း ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဆို အကုန်လုံးက နှစ်သိမ့်ဆုတောင် မရကြတော့ဘူးပေါ့?
ကျွန်တော့အထင် Valve က ဒီနှစ်ထဲမှာ အသင်းတွေ (အထူးသဖြင့် အသင်းကြီးတွေ) အနားယူကြတာ Major တွေဝင်မပြိုင်တာတွေကို ကြိုက်ပုံ မပေါ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ပဲ DPC စနစ်ဟာ တပြေးညီရှိပြီး ခန့်မှန်းရ ခက်နေတာပါ။ ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ Valve ဟာ အသင်းတွေကို Major အားလုံးကို အတင်းအကျပ် ယှဉ်ပြိုင်စေတာထက် Major တွေမှာ အနားမယူအောင် မက်လုံးတွေပေးပြီး ဆွဲဆောင်သင့်ပါတယ်။
အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ဆိုရင် ဒီ DPC League စနစ်အသစ်က Dota မှာ Patch အကြီးကြီး အသစ်ထွက်သလိုပါပဲ။ ကြောင်တောင်တောင် အသစ်အဆန်း အများကြီးနဲ့ ပြန်ပြီး Balance ဖြစ်ဖို့ ပြုပြင်ရဦးမှာပါ။ တချို့လူတွေကတော့ ပြောနေကြပါလိမ့်မယ်။ အသင်းကြီးတွေဟာ မုန့်ကို မျှဝေမစားချင်တာလို့ ထင်ကြမှာပါ။ တကယ်တမ်း ဖြစ်ပျက်နေတာကတော့ မုန့်က ပိုသေးသွားတာဖြစ်ပြီး ဒါကိုခွဲဝေနေတဲ့ ဓါး ကလည်း ကျိုးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။